China Kwibhodi tshaja isetyenziselwa igalufa inqwelo yefolokhwe ukwenziwa kunye nefektri | DCNE
Kwitshaja zebhodi zisetyenziselwa iikholeji zeenqwelo zegalufa
Ukungena manzi, ukungabi nalo uthuli, ubungqina bokuqhushumba kunye nokungangeneki;
Easy ukusebenzisa, ulawulo chip ezimele okrelekrele;
Inemisebenzi efana nokutshaja kwangaphambili, ukucima ngokuzenzekelayo, ukutshaja ngaphezulu, amandla ombane ngaphezulu, kunye nokhuseleko lokubuyela umva kunxibelelwano;
Amandla ombane kunye nokukhoyo ngoku ukukhusela ubomi bebhetri;
Itshaja entsha engena manzi yemoto isebenzisa i-chip yolawulo lwedijithali oluzimeleyo oluzimeleyo;
1. Umbane wobushushu obuzenzekelayo: thintela ukutsha kakhulu kwebhetri ehlotyeni kunye nokuhlawulwa okungaphezulu kobusika ebusika, thintela ukuguqulwa kwebhetri okubangelwa kukuhlawula ngaphezulu, kunye nokubamba ukunciphisa ubomi bebhetri okubangelwa kukuhlawula ngaphezulu.
2. Ukulingana okuzenzekelayo: ukutshaja iqela ngalinye leebhetri kwipakethi yebhetri ngokulinganayo ukukhusela ipakethi yebhetri ekubeni ingabikho ibhalansi kwaye wandise ubomi bebonke bepakethe yebhetri.
3. Ukukhuseleka ngokugqithisileyo: Xa ubushushu bangaphakathi kwetshaja budlula i-70C, umda wangoku uya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Xa ubushushu budlula i-80 ° C, itshaja iya kunqunyulwa ngokuzenzekelayo okwangoku ukunqanda ukonakala kwitshaja ngenxa yobushushu obukhulu.
4.Ukugcina ukhuseleko loqhagamshelo: Xa ibhetri iqhagamshelwe ngasemva, itshaja ngokuzenzekelayo iqhawula isekethe yangaphakathi kwibhetri, kuthintela ukonakala kwitshaja nebhetri.
5. Ukukhuselwa kwesekethe emfutshane Itshaja izakucima umbane ngokuzenzekelayo xa kusenzeka ingozi emfutshane.
Igama Ifakwe ngaphakathi kwitshaja yokubetha yokuhamba rhoqo
Ubungakanani 190 * 140 * 74.5mm
Umbala Mnyama okanye isilivere
IP 66, okungangenwa ngamanzi, ukungabi nalo uthuli, ukungabikho koqhushumbo, ukothuka
Igalelo Voltage AC220V ± 15%, 50-60Hz
Igalelo langoku 13A
Yemveliso Ingozi 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72VDC
Isiphumo sangoku 30A, 25A, 20A, 18A, 15A
Izihlanganisi zokufaka Iplagi ye-EU / US / UK / AU;
I-EU / i-US ibiza umpu kunye nesokethi (ngokuzithandela)
Imveliso amandla 1500W
Egqithileyo I-2000 watt ekhawulezayo engenamanzi i-yinglong lithium titanate 20s 30s 24v 36v 48v 56v 72v 84v lto
Okulandelayo: Ishaja ye-EV ye-6.6KW kwibhodi yokutshaja ngokukhawuleza i-30a 50a 60a 90a
15s 48v Lifepo4 Ibhetri Itshaja
I-24s Lifepo4 Battery Itshaja
48v 13amp Golf Cart Battery Itshaja
Kwinqwelo yegalufa Ibhetri itshaja
Kwinqwelo yegalufa Ibhetri itshaja 48v
Inqwelo yegalufa yeRohs yegalufa Ishaja 36volt 5 Amp
220vac 72v 100a itshaja ibhetri solar for 72v 1 ...